” သူမရဲ႕ TikTok Follower ၁သန္းျပည့္ေအာင္ Follow လုပ္ေပးၾကဖို႔ေမတၱာရပ္ခံခဲ့တဲ့ ေနျခည္ဦး” - Myannewsmedia
ပရိသတ်ကြီးရေ နေခြည်ဦးကတော့ မိန်းကလေးပရိသတ်အခိုင်အမာရရှိထားတဲ့ Beauty Bloggerတစ်ယောက်ပါ။ အခုနောက်ပိုင်း သရုပ်ဆောင်ဘက်ကိုပါကူးပြောင်းလာတဲ့သူမအတွက် ယောကျာ်းလေးပရိသတ်တွေပါ အခိုင်အမာရရှိနေပြီပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
သူမရဲ့ အနုပညာအလုပ်တွေအပြင် သူမရဲ့မိသားစုကိုလည်း ပရိသတ်တွေကစိတ်ဝင်တစားရှိကြပါတယ်နော်။ သူမအနေနဲ့ အတိုက်အခိုက်မျိုးစုံကြုံတွေ့ခဲ့ပေမယ့် ဇွဲကောင်းသူတစ်ယောက်ဖြစ်တာကြောင့် အခုချိန်မှာ ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားကြီးတွေကိုရိုက်ကူးပြီး လူကြိုက်များတဲ့ အနုပညာရှင်မင်းသမီးတစ်ယောက်အပြင်အောင်မြင်တဲ့ ဘလော့ဂါတစ်ယောက်အဖြစ်ရပ်တည်နေတာပါ။
ဒီနေ့မှာတော့ ထူးခြားတဲ့TikTokလေးတွေအမြဲဆော့ကစားတတ်တဲ့ချီချီကတော့ သူမရဲ့ TikTokအကောင့်မှာ Follower 1Million ပြည့်ခါနီးတာကြောင့် ” Follow me to reach One MIL!!!”ဆိုတဲ့စာလေးနဲ့ဖော်ပြခဲ့တာပါ။ ပရိသတ်တွေလည်း ချီချီရဲ့ TikTok Follower ၁သန်း အမြန်ပြည့်အောင် Followလုပ်ပေးကြဖို့တိုက်တွန်းလိုက်ပါတယ်နော်။ ဖတ်ရှုပေးကြတဲ့ ပရိသတ်ကြီးအားလုံး သာယာပျော်ရွှင်တဲ့ နေ့လေးတစ်နေ့ကို ပိုင်ဆိုင်နိုင်ကြပါစေလို့ ဆုတောင်းပေးလိုက်ပါတယ်နော်။
Source : Nay Chi Oo’sMyDay
ဒီေန႔မွာေတာ့ ထူးျခားတဲ့TikTokေလးေတြအၿမဲေဆာ့ကစားတတ္တဲ့ခ်ီခ်ီကေတာ့ သူမရဲ႕ TikTokအေကာင့္မွာ Follower 1Million ျပည့္ခါနီးတာေၾကာင့္ ” Follow me to reach One MIL!!!”ဆိုတဲ့စာေလးနဲ႔ေဖာ္ျပခဲ့တာ​ပါ။ ပရိသတ္ေတြလည္း ခ်ီခ်ီရဲ႕ TikTok Follower ၁သန္း အျမန္ျပည့္ေအာင္ Followလုပ္ေပးၾကဖို႔တိုက္တြန္းလိုက္ပါတယ္ေနာ္။ ဖတ္ရႈေပးၾကတဲ့ ပရိသတ္ႀကီးအားလုံး သာယာေပ်ာ္႐ႊင္တဲ့ ေန႔ေလးတစ္ေန႔ကို ပိုင္ဆိုင္ႏိုင္ၾကပါေစလို႔ ဆုေတာင္းေပးလိုက္ပါတယ္ေနာ္။
Previous post ” Covidေၾကာင့္ မေျဖျဖစ္တဲ့ သူမရဲ႕ တကၠသိုလ္ေက်ာင္းသူေနာက္ဆုံးႏွစ္ေက်ာင္းသူဘဝကို အ႐ႊန္းေဖာက္ေျပာျပလာတဲ့ သဇင္ထူးျမင့္”
Next post “ေဆး႐ုံေတြကိုလႉဒါန္းမယ့္ပစၥည္းတစ္ခ်ိဳ႕တစ္ဝက္သူမဆီေရာက္ရွိေနၿပီျဖစ္ေၾကာင္း ​အသိေပးေျပာျပခဲ့တဲ့သံသာမိုးသိမ့္”